what, when, why: " धन्न बचिएछ "
" धन्न बचिएछ "
कुनै एउटा अफीसमा भर्खरै नयाँ कर्मचारी
भर्ना भएछ र पहिलो दिन अफिस गएछ।
दिनभरी काम गरेपछी चियाको लागी छुट्टी भएछ।
त्यो नयाँ कर्मचारीले फोन गरेर खाजा अडर
गर्दै भनेछ:- ए भाई यहाँ ४ कप चिया र ८ वटा
समोसा छिट्टो लिएर आइज। तर फोन गल्तिले
गर्दा त्यही अफिसको एक्सटेनसानमा पुगेछ।
उताबाट:- ओई त को सगँ कुरा गर्दैछस् तलाई थाहा छ?
नयाँ कर्मचारी:- थाहा छैनउताबाट:- म यो अफिसको M।D. हुँ?
नयाँ कर्मचारी:- तलाई थाहा छ, को सगँ कुरा गर्दैछस्?
उताबाट:- थाहा छैन . कर्मचारी:-त्यसो भने ठिकै छ।
(त्यती भनेर नयाँ कर्मचारीले फोन राखेछ।)
र मन मन्मनइ भनेछ " धन्न बचिएछ "